Xaradii Imaaraatku Ku Tababarayay Ciidanka Soomaalida Oo La Bililiqaystay – Heemaal News Network
Xerada tababarka Imaaraadka Jen. Gordan ee ku tiilay degmada Hodan magaalada Muqdisho ayaa waxaa maanta ka dhacay boob lagula kacay agabkii yiilay ee loo adeegsanayey tababarka ciidamada Soomaalida.
Wararka ayaa sheegaya in Ciidamo ka tirsan kuwiii ay horay u tababareen Imaaraadka ay ka war heleen bixitaanka Saraakiisha Imaaraadka, isla markaana ay bilaabeen in ay boobaan agab ay lahaayeen Saraakiisha Imaaraadka, sida Gaadiid ciidan, qalabkii tababarka iyo qalab kale kale.
Goob joogayaal ku sugan nawaaxiga Xarunta Tababarka ayaa waxay sheegeen in ay arkayeen Ciidamo wata agabkii ay ka tageen Saraakiisha Imaaraadka ee ku sugnaa Xaruntaas.
Saraakiil Soomaali ah ayaa sheegaya in saraakisha Imaaraadka ay qalabkii muhiimka ahaa kala baxeen xeradaas, lana geeyey xarenta Safaarada Imaaraadka Carabta oo ku tiilay degmada C/casiis, iyadoo arintana ay timid xili war ka soo baxay xalay dowlada imaaraadku ay sheegtay in la joojiyey gebi ahaan tababarkii ay siin jireen ciidamada dowlada Somalia.
Tallaabada ay Muqdisho kaga baxeen Saraakiisha Imaaradka ee ku sugnaa Muqdisho ayaa ku soo aadeysa xili sidoo kale maalmo ka hor ay ka baxeen xero ay ku tababarayeen Ciidamada Badda Puntland oo ku taalla Boosaaso.
War-Saxaafadeed ay maanta soo saartay dowlada Somalia waxay ku beenisay inuu xumaaday xiriirkii u dhaxeeyey Soomaaliya iyo Imaaraadka, iyadoo sheegtay inuu bilowday wadahadal u dhaxeeya labada dhinac oo lagu soo afjarayo xiisadii ka dhex dhalatay.
Booliska AMISOM ayaa tababar soconaya 10-maalin Muqdisho ugu furay Ciidamada Booliska Soomaaliya, kaasi oo lagu barayo sida fudud ee lagu ogaan karo Aaladaha Qarax ee loo yaqaano “Improved Wired Explosive Devices (IEDs)” Tababarka ayaa loogu […]
Madaxweynayaasha Maamul Gobolleedyada Oo Hortagay Xildhibaannada Aqalka Sare Ee Soamliya
Madaxweynayaasha dowlad gobolleedka qeybta ka ah dowladda federaalka oo maalmihii ugu danbeeyayba ku sugnaa magaalada Muqdisho ayaa maanta hortagay mudanayaasha Aqalka sare. Ugu horayn waxaa halkaasi warbixin ku aadan waxyaabaha u qabsoomay Aqalka sare iyo […]
Faahfaahinta:-Qarax Khasaaro Nafeed Gaystay Oo Caawa ka Dhacay Gudaha Guri ku Yaala Muqdisho.
Faah faahin dheeraad ah ayaa ka soo baxaya Qarax caawa ka dhax dhacay Guri ku yaalla xaafada Oodweyne ee degmada Deyniile Gobolka Banaadir. Qaraxan laga maqlay qaar ka mid ah xaafadaha degmada ayaanan la ogeyn […]